Director Josh Boone Haagone Kumirira Iwe Kuti Uone 'The New Mutants'
musha Horror Varaidzo Nhau Director Josh Boone Haagone Kumirira Iwe Kuti Uone 'The New Mutants'
by Waylon Jordan August 24, 2020
yakanyorwa na Waylon Jordan August 24, 2020
Kune iyo cast ye The New Mutants, Nyamavhuvhu 28, 2020 ndiko kuzadzikiswa kwerwendo rwavakatanga pamwechete makore matatu kana mana apfuura. Kune director Josh Boone, zvakadaro, rwendo irworwo rwakatanga paakange ari mudiki.
"Ndakafanirwa kunyora [bhaisikopo] neshamwari yangu yepamwoyo wandakaziva kubvira zuva randakazvarwa," Boone akatsanangura mubvunzurudzo ichangoburwa neHorror. “Amai vedu vaive shamwari dzepamwoyo. Uye isu takaverenga Marvel comics nechitendero pamwechete pamwe neese ma1980s isu tichiri vana. Zvave zvichirota hupenyu hwedu hwese kuita zvakadai, asi isu taida kuita chimwe chakasiyana neyakajairika firimu rako gamba.
Kune iye munyori / director izvo zvaireva kunyora nyaya inotungamirwa nehunhu, isingatariswe zvakanyanya kune vakuru vakuru avo vauya zvavo sevanhu vane masimbawo. Izvo zvavakagadzira raive bhaisikopo riine John Hughes cast-dai Hughes anga ave akati siyanei zvishoma mukukanda kwake- kwakaiswa mukati menyika yepfumbamwe yemafirimu anotyisa.
Kuti vagadzire rudzi irworwo rwemufirimu, vakadzokera kuhudiki hwavo uye vakachera muDhimoni Bear saga ye The New Mutants. Paive panguva yenyaya idzi apo hunyanzvi hwaBill Sienkiewicz hwakauya kumberi ndokuunza mhando nyowani yegamba nayo.
"Takakurudzirwa nebasa raBill," akadaro Boone. “Zvakafanana neya comic kwandiri haina kunyanyisa asati auya pairi. Ndakaifarira asi yanga isiri yakakosha kwandiri kana kutyora kusvika iye azobatanidzwa. ”
Nenyaya yacho yakavharirwa munzvimbo, yaingova nyaya yekutsvaga vakakanda kuti vatore pamabasa aya.
Pakutanga, vakaita hurukuro naMaisie Williams (Game of Zvigaro zvoumambo) naAnya Taylor-Joy (Iyo VVitch) uye panguva yese yekunyora, vaichengeta vaviri vatambi vemitambo vachiziviswa nezvinyorwa zvitsva kuitira kuti vagare vari muchiuno nezvekuti mavara avo ari kushanduka sei.
Vamwe vatambi vaisave nyore kuwana chero chikamu nekuti Boone aive akazvipira kutsvaga tarenda raive rakarurama, nedzinza, remabasa.
"Takatora nguva yakareba tichitsvaga Henry Zaga nekuti taida mutambi weBrazil pachinzvimbo ichocho," akadaro director. "NaBlu Hunt, taida wekuAmerica chaiye aive nehukama chaihwo nenzvimbo. Isu taida netariro kuunza chokwadi nekuita izvo. Saka izvo zvaive zvakafanana nekutarisa kune vanhu mazana matatu uye kuyedza kutsvaga iye munhu uyo, kwauri pachako, akaratidzira hunhu hwawanyora. Mumwe munhu anogona kunge akasarudza mumwe munhu asi ivo, kwandiri, vakaratidzira zvakanyanya zvandaida kubva kukasi. ”
Iyo streak yechokwadi inomhanya mukati mese The New Mutants, uye mamwe acho akanangana zvakananga neupenyu hwemukuru.
Boone akarererwa mumhuri yevaKristu inodzvinyirira iyo yakamutungamira kumakwikwi mazhinji evapanduki paakakura, uye anoti, anogona kunyatsoenderana naRahne Wolfsbane, akaridzwa naWilliams mufirimu, nekurerwa kwake kwakasimba nevapristi. avo vanosvika pakumumaka nekuda kwezvitadzo zvake.
Nekutenda, iye Boone hudiki hwake haana kuenda kure zvakadaro. Pane kudaro, akabata kumukira kwake kwakaratidza mukuda kwake kwemabhuku enyambo uye mabhendi senge Pantera neNine Inch Nails.
"Chimwe chezvinhu zvinotonhorera zvandakafanira kuita kuburikidza neichi ndechekuti ndakazosangana naMarilyn Manson," akadaro. “Akaita izwi reVarume Vanonyemwerera. Saka chero nguva panguva yemuvhi iyo yaunonzwa Varume Vanosekerera vachipenga, ndiye Manson ari maikorofoni achienda nzungu. Akaita chifukidziro che 'Chemai Hanzvadzi Diki' kubva Vakarasika Vakomana, inova ndeimwe yemamuvhi makuru pane ese, uye isu takashandisa izvo mune zvese kushambadzira kweiyo bhaisikopo. Ndakanga ndine zviroto zvangu zvemarock uye roll zvakazadzisika ndichigadzira bhaisikopo.
Director vaidadawo nekugona kuunza nyaya yerudo pakati pevatambi vaWilliam naHunt pachiratidziro nenzira iyo, anodaro, inogona kunge iri nguva yekutanga kuti Disney kana bhuku renyambo ripfuure bvunzo yeVito Russo yekubatanidzwa kweLGBTQ .
"Nyaya yavo yerudo ndeye mhando yemuzongoza iyo chinhu chose chakarembera pairi," akadaro. “Pandaive mudiki ndaida Yangu Yangu Yakavanzika Idaho; yakanga iri imwe yemafirimu andaifarira. Ndakarererwa mumhuri maive senge, maKristu vaitenda chaizvo pakuparidza muchechi kuti ngochani dzakaenda kugehena. Ndiri kureva, haisi jee. Ndizvo zvavakataura. Ndizvo zvandakaudzwa kuti ivo vaive vatadzi nezvose. Mafirimu akandipa hwindo chairo renyika chairo kuti ndinzwisise kuti chii chaicho chaicho. "
Boone arikutarisira kuti yake yega firimu ichaita izvo kune vechidiki LGBTQ vanhu, zvakare, sezvo zuva ravo rekuburitswa kweiyo firimu iri pakupedzisira pano. Iri izuva rave nenguva yakareba richiuya.
Iyi firimu yaive yakazara mushure mekugadzirwa apo Disney naFox vakabatana izvo zvinoisa zvese zvakamirira kwegore rakazara. Kunyangwe paine runyerekupe rwehukuru hwekutangazve, kwaive kunonoka uku kwakadzosera iyo firimu kwenguva refu kwazvo. Ivo vakagadzirirwa kusunungura kutanga kwegore rino. Zvino, zveshuwa, kwaive nekunonoka nekuda kweCovid-19.
Sekureva kwaBoone, zvisinei, ino ndiyo nguva, uye nokutendeseka, hatigone kumupa mhosva.
"Vanhu vanofanirwa kutanga kudzokera kumafirimu," akadaro. "Ini ndinofunga chikamu chakakosha chehupenyu, kunyanya kana chikaitwa zvakachengetedzeka nemasiki nezvose. Pane nzira yakachengeteka yekuita izvi. Yakachengeteka kupfuura maresitorendi. Yakachengeteka kupfuura ndege. Ini ndichiri kungonzwa sekunge ndakagadzirira kudzokera kumamovie. Ndiri kufarirawo vana kuti vazvione. "Handifunge kuti kune mafirimu mazhinji mazuva ano anomiririra iwo zvakanyanya."
The New Mutants inovhura ichi Chishanu, Nyamavhuvhu 28, 2020. Tarisa nzvimbo dzemitambo yako dzemuno kuti uwane zvinyorwa, uye tizivise kana iwe uchizotarisa pazuva rekuvhura!
DisneyFOXInterviewsJosh Booneizvo zvitsvaWaylon Jordan
Fantasia 2020: 'Rombo' Inoda Iwe Kuti Uzive Kuti Izvi Hazvisi Zvakajairika
Fantasia 2020: 'Iyo Oak Kamuri' ndeye yeNyanced, Yakarongedzwa Inofadza